Xabsi lagu xukumi doono dadka suuq madow guryaha ku ijaarta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Xabsi lagu xukumi doono dadka suuq madow guryaha ku ijaarta
La daabacay tisdag 7 november 2017 kl 10.18
Maanta ayaa waxa la soo gudbin doonaa hindise heer qaran ah oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa hababka suuqa madow ah ee looga ganacsado kunturaadaha ijaarka guryaha.
Baaritaankaan oo ey sidoo kale ka qeyb qaateen ururka dadka guryaha ijaarta ” Hyresgästföreningen” iyo shirkadda guryaha dadweynaha Iswiidhan ee Sabo ” Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag”, ayaa la rabaa in danbi laga dhigo in qofku uu kunturaad ahaan guri si suuq madow ah ku iibsado.
Marie Linder oo ah madaxa ururka dadka guryaha ijaarta ayaa sheegtey in loo baahan yahay in talaabooyin cad cad la qaado si loo joojiyo guryaha habka suuqa madow ah lagu ijaarto, waxayna tiri :
- Waxaan qabnaa in muhiim ey tahay in guryaha deegaanka ah lagu helo iyadoo aan wax lacag ah la bixin. Maanta dalkaan waxaa ka sameysmey hab suuq madow ah oo dadka qaarkiis looga faa’iideysto. Waxaa kaloo hadda muhiim ah in la dhiso guryo ijaar macquul lagu ijaarto kuwaas oo dadku ey ku helaan safafka ey guryahaas ugu jiraan, ayey tiri Marie Linder.
Sharciga dalkaan ayaa waxaa danbi ah in qofku si suuq madow ah qof kale guri uga ijaaro, hindisahaan maanta la soo gudbin doonaana wuxuu soo jeedinayaa in sidoo kale qofkii kunturaad guri iibsada isna lagu xukumo ganaax lacageed ama xabsi gaarsiisan ilaa iyo muddo laba sano ah, haddii danbigaasi culusyahayna xariga qofkaas la gaarsiiyo ilaa iyo afar sano.
Hindisahaan ayaa sidoo kale xanbaarsan hinsayaal la xiriira ijaarka guryaha ee gacan labaad lagu ijaaro iyo ilaa xadka la ogolaan karo in qofku gurigiisa qof kale si ku meel gaar ahaana uga sii ijaaro ama gurigaas uu ku sii wareejiyo qof horey ula daganaa.
Hindisahaan ayaa raba in ciqaab ganaax lacageed ah iyo xarigba la marsiiyo dadka raba in ey guryahooda hab ganacsi ah uga macaashaan meeshii ey taas badalkeeda guryahaas ka dagi lahaayeen.
Marie Linder ayaa sheegtey in ey jiraan dad lacagao ka sameeya dhibaatooyinka dadka qaarkiisa dhanka gurya la’aanta ka heysta kuwaas la’ guryo ey ku noolaadaan. Waxaan kaloo ognahay in in ey jiraan dad ey khasab ku noqotey in ey gacan labaad ku ijaartaan guryo ijaarkoodu aad qaali u yahay sidaas daraadeed waxaa muhiim ah in sharciyada dhankaas ku saabsan la sii adkeeyo, ayey tiri Marie Linder.